यस्तो गल्ती कसैले नगर्नुहोस् : यो सामाग्री पढिसकेपछि यस्ता बाबुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ? – Wow Sansar
January 8, 2021 64
यस्तो गल्ती कसैले नगर्नुहोस् : यो सामाग्री पढिसकेपछि यस्ता बाबुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ? काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा एक तस्विर निकै नै भाइरल भइरहेको छ । कुनै पनि समस्या सिर्जना गर्नु भन्दा त्यसलाई पहिले रोक्न सावधानी अपनाउनु राम्रो हुन्छ । यो तस्विर देख्दा तपाईंलाई सामान्य लागेको हुनुपर्छ । तर बालबालिकाप्रति अभिभावकहरु कतिसम्म लापरवाह हुन्छन् भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो ।
Prevमाक्स बिना युवतीसंग तस्बिर लिँदा राष्ट्रपतिलाई ३५ सय अमेरिकी डलर जरिवाना
Nextकलंकी जाने भनेर मोटरसाइकलमा लिफ्ट मागेकी युवतीले जब चोभार पुर्‍याइन् र त्यसपछि…